काकाकूल कोइलाबास – देशसञ्चार
गढवा गाउँपालिकामा निर्माण भएको पुरानो ईनार । यो ईनारसँगै कोइलाबासमा बनेका पुराना ईनारमा पानी सुकेको छ ।
दशरथ घिमिरे भदौ १५, २०७६
दाङ (कोइलावास) – मध्य वर्षा । बल्लतल्ल केही कुवामा पानी रसाएको छ । तीन महिना यो कुवाको पानीले प्यास मेटाउन पुग्छ । तर, बाँकी ९ महिना उही भारतीय एसएसबीको क्याम्पमा रहेको धारामा पुग्नु पर्ने बाध्यता । यसरी पानीको लागी कोइलाबासका नागरिकले दुःख भोग्नु परेको एक दशक हुनै लाग्यो । त्यो भन्दा अगाडी कोइलाबासमा पानीको दुःख थिएन ।
एक समय थियो, बजारभरि इनार थिए, आँगनमै खोलाको ‘कलकल’ आवाजले बजारको रौनक अझैँ बढ्थ्यो । कोइलावासमा खोला छ तर, पानी छैन । कोइलाबास खोला चार मिटर गहिरिइसकेको छ, हेर्दा खोलाको पिँध नै भेटाउन मुश्किल हुन्छ ।
कारण हो, खोलाको अनियन्त्रित उत्खनन् । यो उत्खनन् आज भन्दा झण्डै १६ वर्ष अघि गरिएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले लगाएको ठेक्का मार्फत कोइलावास खोलामा भएका ढुङ्गा र बालुवा भारत निकासी गरे । यहाँबाट निकालिएको ढुंगा र बालुवा कानपुर सम्मको रेवले स्टेसन निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गर्न लगिन्थ्यो । अनियन्त्रीत रुपले ढुंगा उत्खनन हुदा नियन्त्रण गर्ने कोही भएन ।
कोइलाबासका ईनारमा पानी सुकेपछी बनाइएको खानेपानी आयोजना समेत सञ्चालनमा छैन् । धारामा पानी आउन छाडेपछि पानी थाप्ने ठाउँमा दाउरा राखिएको छ ।
कोइलाबास ‘विस्थापित’ भइसकेको थियो । नाका खुल्ला थियो । त्यो अनियन्त्रित उत्खनन्ले खोला गहिँरिदै गयो । खोलामा पानी सुक्यो । जमिन खुख्खा भए । भएका इनारहरु पनि सुक्दै गए । इनारमात्रै रहे, भित्रको पानी सुक्यो । अहिले ती इनारभरि झारमात्रै छन्, पानी छैन ।
कोइलाबास ‘विस्थापित’ भएपछि पनि केही कोइलाबासबासीहरुमा झिनो आशा थियो ‘कोइलावास फेरि बन्नेछ ।’
त्यही आशा राख्नेहरु त्यहाँ बसे ।
तर, जीवन बाँच्न पानी त चाहियो नि ?
दशगजामै क्याम्प बाँधेको भारतीय एसएसबीले आठ वर्ष अघि चार सय फिट गहिरो बोरिङ धस्यो । त्यही समयमा नेपाल सरकारले कोइलावासमा खानेपानीको लागी भूमिगत पानी निकाल्न बजेट बिनियोजन नगर्दा बोरिङ्ग धस्न सकिएन ।
तर, भारतीय भूमिमा बिजुली छैन, कोइलाबासमा छ । अनि सुरु भयो ‘एक्सेचेन्ज’ अफर, ‘एसएसबीले कोइलाबासबाट बिजुली लैजाने र, कोइलाबासबासीलाई भारतीय भूमिको बोरिङबाट पानी दिने ।’
कोइलाबासका महिलाहरु । जो पानी ल्याउन भारतीय सुरक्षा बल एसएसवीले राखिदिएको धारामा लिन जान्छन् ।
कोइलाबासमा रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा वल एसएसबीका प्रहरी निरीक्षक एलएस मिनाले पानीले नेपाल र भारत बिचमा सम्वन्ध राम्रो बनाएको बातए । ‘पानी दिदा खुसी प्राप्त हुन्छ’ उनले भने ‘हाम्रो तर्फ चार सय फिट गहिरो बोरिङको पानी छ । यहाँको पानी नेपाल जान्छ । अनि नेपालको बिजुली हामीलाई प्राप्त भएको छ ।’
मासिक एक हजार भन्दा बढीको बिल उठ्ने गरेको छ । एसएसबीले धेरै जसो जेनेरेटर चलाउने हुदा बिजुलीको विल कम उठ्छ । बिजुलीको विल भन्दा धेरै पानी नेपालीले उपभोग गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले बताए ।
कोइलाबासमा खानेपानीको संकट निम्तिएछि हरेक वर्ष झैँ तत्कालीन गाविस र जिल्ला विकास समितिबाट बजेट आएपनि त्यसको सदुपयोग नहुदा पानीको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन पुग्यो । ‘कुवामा पानी सुकेपछि धारा मार्फत पानी ल्याउने योजना भयो । बोक्सरेबाट पानी त आयो तर, धेरै समय टिकेन’ गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ कोइलावासका वडा अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले भने–‘हरेक वर्ष १०–१५ लाख बजेट खानेपानीका लागि भनेर आउँथ्यो । त्यो बजेट धाराको लागि पाईप खन्दै र पुर्दैमा सकियो ।’
स्थानीय सरकार गठन भएपछी कोइलाबासमा नेपाली भूमिबाटै निस्किएको पानी खुवाउने योजनाका साथ कामअघि बढाइएको छ । एक सय ७५ मिटर गहिराईबाट निस्किएको पानी वितरणको योजना छ । कोइलाबास बजारमै खानेपानीको लागि डिप बोरिङ्ग धसिएको हो । प्रदेश सरकार अन्तरगत खानेपानी डिभिजन कार्यालयको बजेट बाट खानेपानीको काम भैरहेको हो ।
कोइलाबाससँग जोडिएको भारतीय भूमिमा एसएसबीले राखिदिएको धारामा पानी खाँदै गढवा–८ कोइलाबासका वडा अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकी ।
दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ कोईलावासमा बर्षौं अघि खनिएका ईनारमा पानी सुकेको डेढ दशक भैसक्यो । ईनारमा पानी सुकेपछि खानेपानीको लागि ०६५ सालमा धारा जडान गरियो । बोक्सरे भन्ने ठाउँमा पाँच वर्षअघि देखि पानीको मुहान क्रमिक रुपले सुक्दै गयो ।
त्यसपछि कोइलाबासको धारामा पानी आउनै छोड्यो । एक सय २० घर धुरी रहेको कोइलाबास बजारका नागरिक खानेपानीको लागि छिमेकी भारतमा भरपर्नु परेको छ । ‘पानी सुक्यो भने त हामी सबै एसएबी क्याम्पमा जाने हो । त्यो भन्दा माथी त पाउदै पाउदैन् ‘स्थानीय कमला केसीले भनिन् ‘पहिले पहिले त २० रुपैयाँ डिब्वा पानी भराएर गाडीमा ल्याएर आउथिम जरुवादेखि । अहिले एसएबीले दिन्छ ।’
कोइलाबासमा सीमा सुरक्षाको लागी नेपाल सशस्त्र प्रहरी वलको पोष्ट छ । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले एसएसबीले दिएको पानी खाने गरेका छन् । ‘हाम्लाई भन्दा बढी जनताहरुलाई समस्या भएको देखिन्छ । चैत वैशाखमा पानीको निकै अभाव हुने भएको हुनाले जनताले निकै दुःख पाउनु भएको छ’शसस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय कोइलाबासका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर खनालले भने, ‘हामीले त एसएसबीसँग समन्वय गरेर तै बिसेक प्रयाप्त नभए पनि कमै मात्र भएपनि खानलाई चाहिँ पुगेको छ ।’
सशस्त्र प्रहरीको गेट बाटै स्थानीयहरु पानी लिन भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्पमा जाने गर्छन् । ‘हाम्रै गेट अघीबाट नेपाली दाजु भाई दिदीबहिनीहरु ग्यालेन बोकेर एसएसबी क्याम्पमा जानुहुन्छ । शुद्ध खानेपानीका लागि भरेर आउनुहुन्छ । हाम्ले देख्छौँ । हामीलाई नै दुःख लाग्छ । के गर्नु हामी पनि पानी ईण्डियाबाट लिएर खाएका छौँ ।’
कुवा सुकेपछि खोलामा खाडल खनेर त्यहाँ जम्मा भएको पानी स्थानीयले खाने गरेका थिए । जर्किन, गाग्रीको मद्धतले यहाँका नागरिकले हरेक दिन पानी ल्याउने गरे ।
पानी सुक्नुको कारण यस्तो
कोइलाबास खोलामा ढुंगा जन्यवस्तु उत्खनन् गरिएपछि गहिरिएको खोला । खोला गहिरिएपछि जमिनमुनिको पानी झन तल गएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग नखुल्दैदेखि दाङको कोइलावास चिनिन थालेको हो । त्यही बेलादेखि कोइलाबासको वेग्लै पहिचान थियो । दाङको माथिल्लोभेग तथा अन्य पहाडि गाउँबाट नुन–तेल किन्न आउने बजार थियो, कोइलाबास । यो यस क्षेत्रको चर्चित नाकाकै रुपमा परिचित थियो ।
भारतको बलरामपुर जिल्लाको जरुवा सिमानामा पर्ने कोइलाबासको जनसंख्या ११ सय ९७ छ । स्थानीय तह पुनसंरचना हुनुअघिसम्म कोइलाबास एउटा सिंगो गाविस थियो । तर अहिले यो गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ मा पर्छ । जहाँ पुग्नलाई तुलसीपुरबाट मुस्किलले अहिले दैनिक एउटा बस चल्छ ।
स्थानीय ६० वर्षीय सई सिद्धिकीले कोइलाबासको कुवामा पानी सुक्नुको कारण कोइलाबास खोलामा ढुंगा उत्खनन रहेको बताए ।
‘ढुंगाको काम गर्ने बेला ठेकेदारहरु ढुंगा सबै निकालेर लगिसके । कुवाको लेवल माथितिर भैगो । सोता तलतिर भैगो । पानी छैन्’सिद्धिकीले भने–‘१४–१५ वटा कुवा छ । ढुंगा निकाल्ने बेला खोलाको लेबिल तल तिर गैगो । झन गड्डा हुँदै गयो । कुवाको पानी खोलै तिर बग्न थाल्यो ।’
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार मनपरी रुपमा ढुंगा गिटी उठाउन थालिएपछि भूमिगत पानी सुक्न थालेको हो ।
कोइलाबास खोलामा पानी बग्दासम्म त्यहाँका ईनारमा प्रशस्त पानी आउँथ्यो । यही क्रममा कोइलाबास खोलामा बनाईएको बाँध भत्कियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत ठेक्का लगाइएको थियो । २०६२ देखि ०६६ सम्म मनपरी रुपमा ढुंगा उत्खनन् गरेर भारत निकासी गरियो । त्यसपछि खोलाको सतह घट्यो । ईनारको गहिराई भन्दा खोलाको गहिराई धेरै भएपछि पानीको सतह घट्न पुग्यो । त्यसपछि कोइलाबासमा पानीको संकट पर्न गएको बुझाई कोलााबास घर भएका जावेद अहमद सिद्धिकीको छ । ‘जव खोलाबाट ढुंगा निकासा भयो । खोला भैगो डाउन । डाउन हुदा कुवा सबै सुक्यो’ उनले भने ‘पानीको सबै भन्दा समस्या अहिले कोइलावासमा छ । मान्छे यहाँ देखि ५ किलोमिटर पर ईण्डिया गएर ल्याउने गर्छन् ।
खानेपानीको संकट बढ्दै गएपछी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन र भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयको पहलमा ६ ठाउँ डिप बोरिङ खनिएको छ । तर, पानी आएन् । सातौँपटक एक सय ७५ मिटर गहिरो डिप बोरिङ खन्दा मुश्किलले पानी भेटिएको छ । मुश्किलले भेटिएको पानीलाई ट्यांकी मार्फत स्थानियलाई वितरण गर्ने तयारी भैरहेको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकिले बताए । ‘पाँच ६ महिना पहिला यहाँ डिप बोरिङ गरेका हौँ । अहिले हाम्लाई यो ठाउँ हेरेर प्रसस्त पुग्नेजती पानी बोरिङमा पाएका छौँ’ उनले भने ‘सप्लाईको लागि हामीसँग बजेट नभएको कारणले गत वर्ष त्यसको काम गर्न सकेनौँ । अहिले स्टिमेट आईसक्यो । खानेपानीको यहाँ समिति छ । उ पनि एक्दमै सकृय छ । खानेपानी टंकी निर्माणको काम सकिएको छ ।’
कोइलाबासमा रहेको वडा कार्यालय ।
कोइलाबासमा पानी पुर्‍याउन प्रदेश सरकारबाट योजना परेको हो । ‘अहिले सम्म ६० लाख जती खर्च भैसकेको छ । लास्ट सम्म कती खर्च हुन्छ । त्यतीबेला कति खर्च भयो भनेर थाहा हुन्छ’ खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले भने ‘तीन चार महिनाको बिचमा पानी वितरण गर्ने योजना छ ।’
भूमिगत पानीको संकट कोइलाबासमा मात्रै छैन् । अहिले दाङको माथिल्लो क्षेत्रमा चुलिदै गएको छ । नदी किनार भन्दा टाढाका बस्तीमा भूमिगत पानी गहिरिँदै गएको छ । गर्मी सुरु नहुँदै कुवाको पानी सकिँदै जानु, मुहानहरु सुक्दै जानु यसका प्रत्यक्ष देखिएका प्रभावहरु हुन् ।
भूमिगत पानीका मुहान सुक्नुमा तराई क्षेत्रमा भएको चुरे दोहन पनि कारक भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डी विपिन ठाकुरले बताए । ‘भूमिगत पानी सुक्नुको धेरै कारण मध्य एउटा कारण चुरे दोहन हो’ उनले भने ‘जमिनमाथिबाट जती धेरै पानी जमिनमुनि गयो, उतिनै भूमिगत पानी बढ्ने हो । चुरे दोहनले जमिनमुनी पानी जानबाट रोक्यो ।’ चुरे बिनास हुँदा ठूला चिराहरु पुरिने, छिद्रा परेका ढुंगा, चट्टानहरु नासिने हुदा पानी जमिनमुनि जानबाट रोकिन्छ । जसले गर्दा भूमिगत पानीको स्रोतमा अवरोध हुदा पानीको संकट उत्पन्न हुने गरेको ठाकुरले बताए ।
उनका अनुसार कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्र को समथर भूभाग छ । यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चुरे नासिदै जाँदा भूमिगत जलको संकट उत्पन्न हुदै गएका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यती मात्रै होइन परम्परागत पोखरी, सिमसार क्षेत्र नासिदै जाँदा भूमिगत पानीको संकट देखिन थालेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत पानीको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरिएको पाइए पनि देशका अन्य भागमा भने यस बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेको पाइएको छैन् । तर, काठमाडौँमा गरिएको सर्भेले भूमिगत पानीको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । स्यालो ट्यूवेल प्रोजेक्ट हुँदा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट भूमिगत पानीको अवस्था जाँच गर्न सर्भे गर्ने कार्यक्रम थियो ।
तर, अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेपछि सर्भेको काम ठप्प जस्तै छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत पानी घटेको भए पनि त्यस बारेमा वृहत अध्ययन हुन सकेको छैन् ।
गर्मी समयमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा लागेको लाइन । भारतीय सीमा सुरक्षा वल एसएसबीको क्याम्पले जडान गरेको धारामा पानी लिन जाने बाध्यता छ ।
‘दाङ अथवा तराईकै भूमिगत पानी कति लेबलमा घट्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन’ डिभिजन खानेपानी कार्यालय दाङका प्रमुख गुणनिधी पोख्रेलले भने ‘पहिले पानी भएका तर, अहिले पानी नभएका कुवाहरु भने गाउँ घरमा भेटीएका छन् । यसको अर्थ के हो भने जमिनमुनिको पानी घट्दो क्रममा छ ।’
भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यककाको दुई ठाउँमा पानीको सतहको अध्ययन गरेको हो । जस मध्य काठमाडौको कीर्तिपुर टौदह र ललितपुरको लभुमा गरेको अध्ययन अनुसार पानीको सतह घटेको तथ्याङ्क छ । सन् २००१ मा कीर्तिपुर ८ टौदह क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो ।
भूमिगत पानीको संरक्षण जरुरी
गढवा–८ कोइलाबास वडा कार्यालयको पहलमा गाडिएको डिप बोरिङ्गबाट वल्ल तल्ल निस्किएको पानी । यही पानीलाई ट्यांकी मार्फत वितरणको तयारी गरिएको छ ।
भूमिगत पानीको संरक्षण आवश्यक छ । अन्य पानीको मुहानहरुको संरक्षण गरे जस्तै जमिनमुनिको पानीको पनि संरक्षण आवश्यक रहेको जल वैज्ञानिक देवकुमार स्याङवोले बताए । उनका अनुसार रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने, पानीको पुर्नभरण हुने ठाउँ जस्तै सिमसार क्षेत्र, चिरा, छिद्र परेका ठाउँहरुको संरक्षण गरे भूमिगत पानी जोगिन सक्छ ।
‘आकाशको पानीलाई रोकेर जमिनमुनि अधिकतम भन्दा अधिकतम समयसम्म छिर्न दिनुपर्छ । त्यसका लागि रिचार्ज पोखरी बनाउने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ’उनले भने ‘पानीको पुर्नभरण हुने चुरे पहाडलाई जोगाई राख्नुपर्छ ।’
यती मात्रै होइन भूमिगत पानीको संरक्षणको लागि फोहर मैला व्यवस्थापन पनि प्रमुख सवाल रहेको उनले बताउ । ‘हाम्रो शहरीकरण बिस्तार हुँदै गएपछाडि अहिले जसरी फोहर मैलाको व्यवस्थापन भैरहेको छ । यसमा कुहिने पनि छ । न कुहिने पनि छ । दिर्घकालीन हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पार्ने तत्वहरु पनि छ’उनले भने ‘त्यो फोहर मैलालाई डिस्पोज गर्दा खेरी चाही जमिनमुनिको पानीसँग नजोडिने तरिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।’
भूमिगत पानी निकाल्न अव्यवस्थित ट्यूबेल गाड्ने गरिएको छ । यो पनि एउटा चुनौति हो । ‘अव्यवस्थित तरिकाले ट्यूबेल संरचना निर्माण गर्ने काम लाई नियमन गर्नुपर्‍यो’ उनले भने ‘जसले पनि ट्यूबेल गाड्न नपाउनेगरी कानून बनाएर एक ठाउँबाट मात्रै काम गर्ने बातावरण मिलाउनु पर्छ ।’
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डी विपिन ठाकुरले भूमिगत पानीको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । पुराना पोखरी, सिमसार क्षेत्र, छिद्र परेका ठाउँहरु मासेर संरचना बनाउन रोक लगाउनु पर्ने र ती क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘दिनप्रतिदिन भूमिगत पानी तल गैरहेको अवस्था छ’उनले भने ‘पानीको लेवल कसरी म्यानेज गर्ने भनेर विस्तृत कार्यक्रम आएको छैन् । विस्तृत कार्यक्रम भित्र भूमिगत पानीलाई जोगाउन गरिने कृयाकलपाहरु समावेश हुनैपर्छ ।’
तराईमा राकिलो भूभागमा पानी बगाइदिने, खाल्डो वा पोखरी निर्माण गरेर पानी जम्मा गरिदिने विधि प्रयोग गर्नसकिन्छ । खोल्साहरुमा चेकड्याम बनाउदा पानी पुर्नभरण हुन्छ । भिरहरुमा पानी छिटो बगेर जान नदिई रोक्ने विधि अपनाउनुपर्छ । यसका साथै घरको छतमा जम्मा हुने पानी संकलन गरेर जमिनमुनि पठाउने प्रविधि तयार पार्न स्थानीय तहले नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।
सबै तस्बिर : दशरथ घिमिरे/देश सञ्चार